ရေစိုခံ chipboard - တရုတ် Weifang အားရွှင်လန်းပင်လယ်ကုန်သွယ်ရေး
Fancy venneer အထပ်သား
HPL အထပ်သား laminated
ဆွန်း core ကို chipboard
PVC အစွန်း banding
ကျွန်ုပ်တို့၏ Group မှ
HPL / အမြင့်ဖျင်စာရွက်ဖိ
Veneer မျက်နှာ Chipboard
အမြင့် gloss ခရမ်းလွန် MDF စာရွက်
အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့ပရိဘောဂများနှင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဘို့အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော, လွယ်ကူသောထည်မြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုကွေး, ခိုင်မာတဲ့ဝက်အူကိုင်ပြီးစွမ်းရည်အဖြစ်ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ, အပူခံနိုင်ရည် Anti-ငြိမ်, ကြာရှည်နှင့်မျှမရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
ထုတ်ကုန်အမည် ရေစိုခံ Chipboard -Plain chipboard, မယ်လမင်းမျက်နှာများသို့မဟုတ် Veneer မျက်နှာ Chipboard
အရွယ် 1220mm * 2440mm (4'x8 ') သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား။
အထူစာနာထောက်ထားရေး <+ - 0.2mm
မျက်နှာ / သို့ပြန်သွားရန် လွင်ပြင်, မယ်လမင်းစက္ကူသို့မဟုတ် veneer
မယ်လမင်းစက္ကူအရောင် 1.Wood ကောက်ပဲသီးနှံအရောင်
ကဲ့သို့သော: စသည်တို့ကိုမေပယ်, sapele, ထင်းရှူး, ပြာ, ပန်းသီး, Beech, ချယ်ရီ, ကျွန်းသစ်, walnut, Weng, သပိတ်ပင်, ဂုံ,
ကဲ့သို့သော: အဖြူမီးခိုးရောင်, အပြာ, အစိမ်း, အနက်ရောင် , အနီ, လိမ္မော်ရောင်, ပန်းရောင်, အဝါရောင်, etc
Veneer မျိုးစိတ်သစ် ဘုစပတ်သစ်သား, လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့, ပြာ, sapele, walnut, ကျွန်းသစ်, သပိတ်ပင်, မေပယ်, Beech, ချယ်ရီ, အနီ, Insight web studio ၏မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
Veneer အဆင့် တစ်ဦးက, AA ကိုသို့မဟုတ် AAA
အမျိုးအစားရင်ဆိုင်ခြင်း single-မျက်နှာ, ကို Double-မျက်နှာ
မျက်နှာပြင်ကုသမှု Matt, ဖောင်းကြွ, အသွေးအရောင်, Wood ကဖောင်းကြွ, ရတဲ့အရာတွေ, etc
core ပစ္စည်း ပေါ့ပလာပင်, အသီးပင်, ထင်းရှူးသို့မဟုတ်ရောနှောသစ်သားချစ်ပ်
ကော်ကပ် MR, WBP, မယ်လမင်းကော်
သိပ်သည်းဆ 680 ~ 730kg / m3
အစိုဓာတ်ကိုအကြောင်းအရာ 5% -10%
Formaldehyde ထုတ်လွှတ်မှုစံချိန်စံညွှန်း E0 / E1 / င 2
အသုံးပြုမှု & စွမ်းဆောင်ရည် အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့ပရိဘောဂများနှင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဘို့အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော, လွယ်ကူသောထည်မြင့်မားအစွမ်းသတ္တိကိုကွေး, ခိုင်မာတဲ့ဝက်အူကိုင်ပြီးစွမ်းရည်အဖြစ်ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ, အပူခံနိုင်ရည် Anti-ငြိမ်, ကြာရှည်နှင့်မျှမရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
အဖုံး စံပို့ကုန် Pallet ထုပ်ပိုး - မြန်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းအလုပ်သမားစွဲချက်နှင့်အတူချ load လုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာလျော့နည်းအရေအတွက်။
လျော့ရဲရဲနဲ့ထုပ်ပိုး - အတူတူပင်တင်ပို့အပေါ်ပိုပြီးအရေအတွက် load, ဒါပေမယ့်ချ load ဖို့ပိုပြီးလုပ်အားစွဲချက်ကုန်ကျနိုင်ပါ။
Supply နိုင်ခြင်း 20000 ကုဗမီတာ / လ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ B က / ll A / C ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်ကျန်ငွေမတိုင်မီ 30% T / T သိုက်။
ပို့ဆောင်ချိန် မျက်မှောက်မှာသိုက်သို့မဟုတ်မူရင်း L ကို A / C ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 15 ရက်အတွင်း
လက်မှတ်ပေးခြင်း ISO9001: 2000, အီး, CARB, FSC, P2
ကျယ်ပြန့်ပရိဘောဂအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ မီးဖိုချောင်ဗီဒို, ရုံးစားပွဲခုံ, panel ကိုမှို, ထမင်းစားခန်းအစုံ, အတွင်းပိုင်းတံခါးကို။
1. ပရိဘောဂ Making
ပိုပြီးကုန်ကျကြောင်းပရိဘောဂ fiberboard နှင့်သဘာဝဆန်သစ်သားအမျိုးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ အတူတူကြည့်အခြေခံအမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပြီးအများအပြားခေတ်ရေစီးကြောင်းပရိဘောဂကုမ္ပဏီများသည်ကြီးမြတ်ခဲ့ကြ
3. မူလစာမျက်နှာ accents
အသံထွက်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရာအရပျတိများနှင့်တန်ဆာ၏ပုံစံအတွက်ပြတင်းပေါက်များ, တံခါးရွက်နှစ်ရွက်, ကြမ်းပြင်နှင့်မျက်နှာကျက်န်းကျင်ရှိပါတယ်။ သူတို့အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့အနေဖြင့်ဖန်တီးသည့်အခါဤအပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းချိုသာလုပ်နေကြသည်။ အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်
2) နည်းနည်း linear တိုးချဲ့ကိန်း
6) အဘယ်သူမျှမ ratten သို့မဟုတ်ယိုယွင်း
7) အနိမျ့ Formaldehyde ထုတ်လွှတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် & စျေးနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သော 1.Your စုံစမ်းရေးကော်မရှင် 24hours အတွင်း replied လိမ့်မည်။
3. ကောင်းပြီ-လေ့ကျင့်သင်ကြား & အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းသင်တန်း၏အင်္ဂလိပ်အားလုံးသင့်ရဲ့စစ်ကြောင်းဖြေဆိုရန်ရှိပါသည်။
6. အခမဲ့ထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပေး, ဖောက်သည်များ '' အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်အညီထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြံပြုပါသည်။
ဖောက်သည်များ '' ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်အခမဲ့လူသိရှင်ကြားပစ္စည်းများ 7.Provide ။
8 .. ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမျိုးမဆိုတတိယပါတီမှလျှို့ဝှက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် 9. ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုသွားလျှင်ပြန်မရပါ။
10. ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သောဘွတ်ကင်ဟိုတယ်များ, လမ်းပြသောအကူအညီနဲ့ဝယ်, အခြားကုမ္ပဏီများ '' သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးနေနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်ရောင်းသူရှာနေအဖြစ်ရေရှည်ဖောက်သည်မှတရုတ်အတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။
A1: ကျနော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံဖြစ်ကြောင်း, တည်ငြိမ်ရညျအသှေးနှင့်အတူသင်တို့ရှိသမျှကိုအချိန်ထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်။
A2: 30 ပထမဦးဆုံးမှာ% T / T သိုက်, 70% ချိန်ခွင်လျှာလစာအတွက်တင်ပို့မီ။ နမူနာအမိန့်များအတွက်ပထမဦးဆုံးမှာ 100% အပြည့်အဝပေးချေမှု။
Q4: ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည် T / T accept Alipay, L ကို A / C, PayPal က
A4: ငါတို့သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်လိပ်စာသို့မဟုတ်ဦးတည်ရာဆိပ်ကမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ပေးပါ။ ထိုအခါအရေအတွက်နှင့်အညီသင်ဘတ်ဂျက်ပြောပြပါ။
Q5: အ MOQ ကဘာလဲ?
A5: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ 1 pallet ဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာအမိန့်အဘို့အဘယ်သူမျှမ MOQ ။
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: တယ်လီဖုန်း: 0086-536-5605673; မေးလ်: joyseawf@126.com; တယ်လီဖုန်း: 0086-13395366556
ယခင်: Veneer မျက်နှာ Chipboard
ROOM တွင် 710, Incubator အဆောက်အအုံ, Binhai ဧရိယာ, Weifang အားစီးတီး, ရှန်ဒေါင်း